को- रोना संक्रमणका यि ५ खतरनाक लक्षणहरु जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ ! (भिडियो सहित)
नेपाल अनलाइन पत्रिका। काठमाडौं। को- रोना संक्रमणका यि ५ खतरनाक लक्षणहरु जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ ! भारतमा को- रोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र भारतमा २ लाख ५९ हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा १ हजार ७ सयभन्दा बढी संक्रमितको मृ- त्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँगै नेपालमा पनि को= रोनाबाट हुने संक्रमण र मृ- त्यु दर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
विज्ञका अनुसार अहिले को- रोना संक्रमणका नयाँ–नयाँ लक्षण पनि देखापरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा भारतस्थित उजाला सिग्नस हस्पिटलका हृदयरोग विशेषज्ञ डाक्टर एस.सी. तिवारीले को- रोना संक्रमणका खतरनाक ५ लक्षणबारे बताएका छन्। भारतीय पत्रिका अमर उजालामा प्रकाशित उनका सुझाव हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:- ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
१) सजिलो काम पनि कठिन लाग्नु:- को- रोना संक्रमणले मस्तिष्कको काम गर्ने क्षमता र स्नायु प्रणालीमा पनि असर पार्छ। धेरै संक्रमितमा भ्रम, बेचैनी र बेहोसीजस्ता लक्षण पनि देखिएका छन्। विशेषज्ञका अनुसार यदि तपाईंलाई को- रोना संक्रमण छ र सजिलो काम गर्न पनि कठिनाइ महसुस भइरहेको छ भने अथवा बोल्न गाह्रो भइरहेको छ भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
२) सास लिन गाह्रो:- सास लिन गाह्रो हुनु को- रोना संक्रमणको प्रमुख र खतरनाक लक्षण हो। यदि तपाईं को- रोना संक्रमित हुनुहुन्छ भने ध्यान पुर्याउनुस्, किनकि सास लिन गाह्रो भयो भने ज्यानै जाने जोखिम पनि आउन सक्छ। यसकारण यस्तो लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ, डाक्टरसँग सम्पर्क गरिहाल्नुपर्छ। ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
३) अक्सिजनको मात्रा कम हुनु:- को- रोना संक्रमण भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा निकै नराम्रो प्रभाव पार्छ। हाल धेरैजसो संक्रमितमा अक्सिनको स्तर कम देखिएको छ, जसले गदाृ उनीहरू अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भइरहेका छन्। यीमध्ये कतिपयको मृ- त्युसमेत भइरहेको छ। यसकारण सतर्क हुन जरुरी छ। ***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
४) ओंठ नीलो देखिनु:- को- रोना संक्रमित व्यक्तिको छाला वा ओंठ नीलो देखियो भने सामान्यतया यो रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको संकेत हो। यस्तो लक्षण देखियो भने सतर्क हुन जरुरी छ र तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ।
५) छातीको दुखाइ:- छातीमा कुनै पनि किसिमका दुखाइलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यो पनि कोरोनाका ख- तरनाक लक्षणमध्ये एक हो। तपाईंमा यस्तो लक्षण देखिएको छ भने तुरुन्त अस्पताल जानुस्।
***यो समाचारको भि-डियो हेर्न तल क्लिक गर्नु 👇👇👇***
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीर लापरबाही गर्‍योः वर्षमान पुन